Vadzidzi vanogadzira anotyisa mwana wiricheya - Karman Healthcare
Vadzidzi vanogadzira anotyisa mwana wiricheya
Posted on September 9, 2013 November 20, 2020 by csr 1687
Vadzidzi veUAB vanogadzira wiricheya izvozvo zvinobatsira remara vana vanofamba
Apo Jennifer Sheppard akaziva izvo University of Alabama kuBirmingham School of Engineering vadzidzi vakagadzira wheelchair yemagetsi yevana vane makore 1- kusvika matatu, aishuvira kurega mwanasikana wake achizama.
Mary Graham, 2, akazvarwa aine scoliosis, hip dysplasia uye muscular dystrophy. Kurota kwaSheppard kwemwanasikana wake kumhanya uye kusvetuka kwakatsiviwa nezvirongwa zve hupenyu vagere pakamira wiricheya.
Mushure mekupinda mune imwe-ye-ye-mhando, wiricheya yakaita mota yakagadzirwa seprojekti yepamusoro nevadzidzi vepasi pegiredhi muUAB's biomedical engineering Capstone Design Course, Mary Graham akasangana nenzvimbo yekutamba zvisati zvamboitika. Iyo wiricheya iri akashongedzerwa nemufaro uye nebasa rependi rinoshamisira vana, uye iri pazasi pevhu kuitira kuti vana vadiki vasaswedere pamusoro pevamwe vavo. Iyo zvakare ine yekuwedzeredza system iyo iyo vabereki vanogona kumisa kufamba kwemwana pane iyo pafiripi yeswitch.
"Iyi sarudzo huru kune vana vanogona kunge vasingafambe, pachinzvimbo chekuseka wiricheya, "Sheppard akadaro. "Zvinoita kuti zvinakidze kuti vakwanise kuongorora, uye zvinovabatsira kuziva."
Kwemakore anopfuura gumi nemashanu, uye ne rubatsiro weNational Science Foundation rubatsiro, vakuru veinjiniya vakabatana nemasangano akasiyana enharaunda anosanganisira United Cerebral Palsy, Vana veAlabama nevamwe, kugadzira zvigadzirwa zvehunyanzvi kubatsira vanhu vakaremara. Vadzidzi vanoshanda nemutengi wavo kuti vaone chinodikanwa cheinjiniya. Ivo vanogadzira kuongorora kwemusika uye bhizinesi modhi vozogadzira prototype.
"Ndiwo mukana wekupedza chinetso cheinjiniya chaicho-chenyika," akadaro Alan Eberhardt, Ph.D., purofesa uye mubatsiri wedhipatimendi weChikoro cheUinjiniya. “Vadzidzi vakapedza makore mana apfuura vachishanda mumabhuku ekuverenga pamwe nemakomputa. Capstone Design Course inovabvumira kushandisa ruzivo rwavo. ”
Gore rino rapfuura, boka revasina kudzidza - Ryan Densmore, Shelby May, Dan McFalls naStephen Mehi - vakavaka wiricheya yeiyo Bell Center, chirongwa chekutanga chekupindira chevacheche nevacheche vane zvidikanwi zvakakosha. Iyo Center, uko Mary Graham ari mutengi, yaida a kufamba mudziyo wekudzidzisa vana vadiki kushandisa inofambiswa wiricheya; zvanga zviri kushandisa rakakweretwa.
Vadzidzi vakapedza maawa asingaverengeke mubazi rezvigadzirwa vachiuya nemuenzaniso uyo waizobatsira vana, pamwe nekusangana nematanho ekugadzira uye zvirevo zvemitemo. Nebhajeti yemadhora chiuru nemazana mashanu, vadzidzi vaifanirwa kuve nehunyanzvi, vachipwanya zvikamu kubva pasimba renyanzvi rekare wiricheya.
"Maitiro ekuivaka ave chikamu chakanakisa chedzidzo yangu yekoreji," akadaro Densmore, mukuru kubva kuMorris, Ala. "Chirongwa chose chaive mukana wekushandisa ruzivo rwese rwandakaunganidza mumakore angu mana kuUAB."
Bell Center Physical Therapist Kate Stripling akadaro iyo wiricheya ine zvakawanda zvinobatsira.
"Iri kudzidzisa vana kuti vanokwanisa kufamba vakazvimiririra, kunyanya kune avo vasati vamboona zvakadaro," akadaro.
Dhizaini yevadzidzi iri kuongororwa nekuda kwayo kugona kushambadzira. Kana kududzira mubhizimusi rinoshanda bhizimusi kuchikwanisika, chirongwa ichi chinogona kuiswa mune itsva chirongwa cheinjiniya chekupedza kudzidza.
"Iko kunzwa kukuru kubatsira mumwe munhu, kunyanya vana," akadaro Densmore, achiwedzera kuti kuziva kuti kwaizove kuBell Center yakagadzirwa iye anodada. "Ini handifunge nezve imwe nzvimbo irinani."
Yekutanga Chinyorwa neUAV Nhau
Nzira gumi neshanu dzekugadzirisa imba yemunhu akaremara
Kubvunzana nehurema hwepabonde mubatsiri